Super Mario Run inodonha kubva kune makumi mashanu epamusoro emashandisirwo eIOS | IPhone nhau
Super Mario Run inodonha kubva kumusoro makumi mashanu epamusoro kwazvo maapplication eIOS
Sevashandisi veApple pavanogadzirira kunakidzwa neSuper Mario Run, iyo yakarongerwa kuvhurwa munaKurume, chamupupuri chamupombi chakatorasikirwa nemabhero ese ayo akauya chete kuchitoro cheApple. Vazhinji vanga vari vashandisi vakatsoropodza kuti mutambo uyu waive nemutengo wakakwira kudaro, maeuro gumi, kuti vakwanise kutamba zvikamu zvese zvavakatipa, izvo inogona kumanikidza Nintendo kuti afungisise mutambo uyu nekupa mukati-app kutenga panzvimbo kune avo vese vashandisi vanoda kuenderera vachinakidzwa nhanho nyowani.
Super Mario Run yakarova App Store musi waDecember 15, ichisvika makumi mana emamirioni mumazuva mana chete uye ichiva mumwe wemitambo inokurumidza kukurumidza kuwana $ 40 miriyoni mukutengesa. Super Mario Run, haina kutenga mukati mekushandisa, saka, sezvanga zvichitarisirwa, iyo mari yairi kugadzira parizvino yadonha zvakanyanya kana ichienzaniswa neyekutanga hype. Sarudzo chete inowanikwa kuti urambe uchinakidzwa nemutambo uzere kubhadhara maeuro gumi Izvo zvinodhura, chitsama icho, sekutaura kwandataura pamusoro, chinopunyuka kunzwisiswa kwevashandisi vazhinji, zvisinei nekuti vakavimbika zvakadii kuna Mario.
Zvinoenderana nedhata rakapihwa neSensorTower, iko kunyorera kwakangodzikisa bhawa kune makumi mashanu mafomu anoita mari zhinji muApp shop, chinzvimbo icho chaakange achichengetedza kubvira kubvira payakatangwa, mwedzi nemazuva mashanu apfuura. Mugirafu, tinogona kuona kuti mazuva mashanu ekutanga, iko kushanda kwaive kubudirira kukuru, asi Nekufamba kwemazuva, mubereko nemari yaiburitsa yakaderera. Kubheja kwaNintendo kunotevera Fire Emblem: Magamba, ayo kuvhurwa kwakarongerwa Kukadzi 2, kunyangwe ichatanga kusvika papuratifomu yeApple uye gare gare paIOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Super Mario Run inodonha kubva kumusoro makumi mashanu epamusoro kwazvo maapplication eIOS
Zvinonyadzisa sei !! Saka ndezvese nezvose, isu tiri makonzo akadaro ... kuti isu hatishandise € 10 kumutambo wakazara, asi zvadaro isu hatina hanya kushandisa 100/200 pafodya, doro, nezvimwewo nezvimwe. Zvakanaka, hapana chinhu .. kuenderera nemitambo ye-in-app kubva ku € 0'99 kusvika ku € 99 zvirinani .. haubhadhare iwo ma € 10 uye iwe uchabhadhara makumi mana zvakapetwa, kana iwe uchida kufambira mberi.
Ini ndaizobhadhara zvakatowanda kana mutambo wacho wanga wakakodzera asi hauna kudaro, fananidzo inoita kunge yakanyanyisa kwandiri.
Pindura kuna Yo;)
Iyo yakakodzera peni imwe neimwe, hongu kana iwe usingade iyo .. haugone kuitora kana kuitenga, inotonhorera kwazvo! Chinhu chega chakasarudzika chandingaisa ... ndechekuti inofanira kunge iri yemahara, ndiko kuti, famba kwese kwaunoda, poindi ndeyekuti isu tinosarudza kuve nemimwe-app mitambo uye zvinonyadzisa! Nei zviri izvo zvatinowana nekutenda kune avo vanhu vasingashandise kana kobiri, kwemakore akati wandei ikozvino .. Ini ndakaburitsa mutambo uye ndikaubvisa panguva iyoyo .. nei ndichipfuura kubva pamitambo nekutenga kwakabatana, izere chitsotsi, sezviri kuitika nemitambo yeconsole nezvimwe uye zvinoitika nekuti tinozvida nenzira iyoyo
Dai yaive yemahara mode ini ndaizobhadhara kusvika ku15 kana makumi mairi euros, asi izvi zvinoshungurudza uye HAISI MARIO. Ndiri kuda kudzokera kumashure! Ndiani akauya neiyi otomatiki mutyairi webhuru?
Zvakanaka, kana nemutambo mudiki ivo vakaburitsa mamirioni makumi matatu nematanhatu mumwedzi, vanotora 36 mwedzi wega uye vachiwedzera hehehe
Apple inomhan'arira Qualcomm ye $ 1.000 bhiriyoni
Apple's $ 1.000 bhiriyoni kudyara muSoftbank yakasimbiswa